नेपालमा आज राति १२ बजेदेखि बन्द हुदैछ यस्ताे काम, अब के हुन्छ ? - Mitho Khabar
April 4, 2020 mithokhabarLeaveaComment on नेपालमा आज राति १२ बजेदेखि बन्द हुदैछ यस्ताे काम, अब के हुन्छ ?
आजदेखि काठमाडौं बाहिरबाट थप उद्धारको काम बन्द भए पनि काठमाडौंमा रहेका विदेशी नागरिकलाई भने ती मुलुकहरुले फिर्ता लैजाने काम भने जारी रहने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा धनगढीसम्मबाट पर्यटकहरु काठमाडौं ल्याइएको छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांकअनुसार लकडाउन शुरु भएयता देशका विभिन्न स्थानबाट १७०८ जना पर्यटकको उद्दार भएको छ । यो शुक्रबार काठमाडौं आउँदै गरेका पर्यटकको समेत संख्या जोड्दा पुग्ने संख्या हो ।
अष्ट्रिया र चेक रिपब्लिकले समेत मलेसियन एयरबाटै यात्रु फिर्ता लैजाने तयारी गरिहकेको बोर्डको भनाइ छ । जर्मनीले समेत एउटा चार्टर्ड जहाज नेपाल पठाउने तयारी गरेको छ । कोरिया र बेलायतले पनि आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजाने तयारी गरिरहेका छन् ।
यसपछि विभिन्न जिल्लामा रहेका पर्यटकहरु शनिबारदेखि काठमाडौं आउन पाउने छैनन् । यसबीचमा कतिपय पर्यटक स्वदेश फर्कन चाहेका छन् भने कतिपय आफ्नो देशमा कोरोनाको संक्रमण बढी भएको र नेपालमै सुरक्षित भइने ठानेर भिसा अवधि नसकिउन्जेल यतै बस्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
यसैबीच कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण संक्रमित हुनेको संख्या १० लाख नाघेको छ । हालसम्म संक्रमितको संख्या १० लाख १४ हजार ४ सय ९९ पुगेको छ। त्यस्तै, कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५५ हजार नाघेको छ। हालसम्म ५३ हजार १ सय ५९ को मृत्यु भइसकेको छ । हालसम्म २ लाख १२ हजार १८ निको भएका छन् ।
त्यसैबिच कोरोना भाइरसबाट जोगिन एउटा प्रमुख अस्त्रका रूपमा हेर्ने गरिएको छ, फेस मास्कलाई । तर, के मास्कले कोरोना संक्रमण रोक्न सक्छ त ? यो विषयलाई अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले नयाँ शिराबाट अन्वेषण गरिरहेको छ ।
अहिले डब्लूएचओेले खोकिरहेको कुनै व्यक्तिबाट संक्रमण नसरोस् भन्नका लागि कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम गर्न सुझाव दिँदै आएको छ बिरामी वा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकाहरूलाई मास्क लगाउन डब्लूएचओेले भनेको छ । तर स्वस्थ व्यक्तिले भने जतिबेला पनि मास्क लगाइरहनु नपर्ने उसको निष्कर्ष छ ।
त्यसो भए यस्तोमा फेस मास्कले कति सहयोग गर्छ त ? प्रोफेसर बोउरोउबाको भनाइमा खासगरी घरभित्र, हावा राम्ररी बाहिर पास नहुने अवस्थामा मास्कले सहयोग गर्छ । उदाहरणका लागि कोही संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएको बेला मास्क लगाएको छ भने उसको श्वासको प्रवाहलाई यसले छेक्छ र भाइरसलाई मुखमा आउन दिँदैन ।
मास्क लगाउँदा पनि धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । मास्कले नाकमा ट्याप्प कसेको हुनुपर्छ । यो यदि थुकले चिसो भयो वा भिज्यो भने तुरुन्त बदल्नुपर्छ । अन्यथा त्यहाँबाट भाइरस छिर्न सक्छ । मास्क खोल्दा पनि हातमा संक्रमण नसर्ने गरी सावधानीपूर्वक खोल्नुपर्छ ।मास्क हरदम लगाइरहनुपर्ने हेइम्यानको कथन छ । उनी भन्छन्, ‘मास्क फुकालेर खाना वा चुरोट खाने अनि फेरि त्यही मास्क लगाउने गर्नु हुँदैन ।’